“သေဆုံးချိန်မှာ ခန္ဒာကုိုယ်ပေါ်က ခံစားချက်မှန်သမျှကုို သိနုိုင်သလား?” - Thutazone
“သေဆုံးချိန်မှာ ခန္ဒာကုိုယ်ပေါ်က ခံစားချက်မှန်သမျှကုို သိနုိုင်သလား?”
By ThutammPosted on February 8, 2018
Via : Thet Thet Tun
၁၉၈၅မှာ ဦးဂုိုအင်ကာရဲ့ တပည့်တယောက်က ခုလုို မေးတယ်။
“သေဆုံးချိန်မှာ ခန္ဓာကုိုယ်ပေါ်က ခံစားချက်မှန်သမျှကုို သိနုိုင်သလား?”
ဦးဂုိုအင်ကာ က ၄င်း၏ မိခင် သေဆုံးသွားပုံကုို ဥပမာပေးပြီး အောက်ပါအတုိုင်း ပြန်ဖြေပါတယ်။
(ဒီအကြောင်းကုို ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဧပြီလထုတ် ဝိပသနာ သတင်းစဉ်မှာ ထည့်သွင်း ဖေါ်ပြခဲ့တယ်)
“ကျွန်တော်ဟာ မိသားစုထဲမှာ သား၆ယောက် ရှိတဲ့အနက်က သားတဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဦးလေးနဲ့ အဒေါ်တုို့မှာ သမီးချည်းပဲ ၆ယောက်ထွန်းကားပြီး သားမထွန်းကားတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ခပ်ငယ်ငယ်မှာ အပြီးအပုိုင် ခေါ်ယူ မွေးစားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်မွေးစားမိခင် ဟာ ဆရာကြီး ဦးဘခင်ရဲ့ တပည့်ရင်း ဖြစ်ပြီး ဆရာကြီးရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ တရားထုိုင်ခဲ့တာ အတော် ပေါက်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးရဲ့ အထူး အလေးထားချစ်ခင်မှုကုို ခံရပြီး မှတ်မိသလောက်ဆုိုရင် ဆရာကြီးရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်တဲ့ တဦးတည်းသော တပည့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၆၇ခုနှစ် အမေ့ အသက် ၇၀ အရွယ်ခန့်မှာ အသည်းကင်ဆာဖြစ်နေတာကုို သိရပါတယ်။ ရောဂါက အတော် ကြွမ်းတဲ့ အဆင့် ရောက်နေပါပြီ။ အမေ ဘယ်အချိန်ကတည်းက ခုလုို ဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆုိုတာကုို တစ်မိသားစုလုံး..မသိကြပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆုိုတော့ တခါမှ ထုတ်ပြီး မငြီးညူဘူးလုို့ပါ။ မကွယ်လွန်မီ တပါတ်လောက် အလုိုကျတော့မှ အသဲရှိတဲ့ နေရာကုို ထောက်ပြီး နာတယ်လို့ ခပ်တုိုတုိုပဲ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော့် မိန်းမ က.. ဘယ်လုို နာပုံမျိူးလဲလုို့.. မေးတဲ့အခါ ကလေးမွေးခါနီး နာသလုိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခုနာတာက မရပ်မနား အမြဲနာနေတာပါ လုို့ ဆုိုတယ်။
အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်လာတော့ အမေ့ရဲ့ တရားထုိုင်သက်တမ်းက ၇နှစ်လောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ အမေဟာ ရိပ်သာ တစ်ခါသွားရင် ၁၀ရက်၊ တလ၊ သုို့မဟုတ် အချိန်အတုိုင်းအတာ တခုအထိ ကြာပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ခရီးဆောင်အိတ်ဟာ အမြဲလုို အဆင်သင့် ထုတ်ပုိုးပြီးသား ဖြစ်နေပါတယ်။ ရိပ်သာ မသွားဖြစ်လုို့ အိမ်မှာဆုိုလည်း သူ့ဘာသာ သူ တရားထုိုင်ပါတယ်။ အမေဟာ ဘာသာရေး အလွန်ကုိုင်းရှိုင်းတဲ့ ဟိန္ဒူ အသုိုင်းအဝုိုင်းက လာပေမဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာရေးအရ ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဇျယ်တာ၊ ဘုရားရှိခုိုးတာမျိူးတွေ လုံးဝ မလုပ်တော့ဘဲ အားလုံးကုို အတိတ်မှာ ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။
ကင်ဆာ ဖြစ်တယ်လုို့ သိတဲ့နေ့က စပြီး ၇ ရက်အကြာ ကွယ်လွန်ချိန် အထိ မည်သူ့ကုိုမျှ သူ့ရောဂါအကြောင်း ပြောခွင့် မပြုတော့ပါဘူး။ ဝိပသနာတရားထုိုင်မဲ့သူတွေကုိုသာ သူ့အခန်းထဲကုို ဝင်ခွင့်ပြုပြီး တိတ်ဆိတ်စွာ ပြန်လည် ထွက်ခွါစေတယ်။ ဟိန္ဒူထုံးတမ်းစဉ်လာမှာ ကွယ်လွန်ခါနီး လူကုို လာရောက် အရုိုအသေပေးကြရပါတယ်။ အမေဟာ အလွန် လူသိများ ထင်ရှားသူလည်း ဖြစ်လုို့ အခုလုို ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ မြင်ချင်တွေ့ချင်သူတွေ များလှပါတယ်။
နောက်ဆုံအခြေအနေကုို ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ အမေက လူတွေကုို အိမ်လာလည်ဖို့ခွင့်ပြုပေမဲ့ တရားထုိုင်မဲ့သူ မဟုတ်ရင်တော့ သူ့အခန်းထဲကုို ပေးမဝင်ဘုို့ တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားတယ်။ အခန်းပေါက်ဝမှာ တိတ်ဆိတ်စွာ ထုိုင်ရပါတယ်။ အမေက ဆေးကုဖို့ လုံးဝ စိတ်မဝင်စားပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ သားတယောက်ရဲ့ ဝတ္တရားနဲ့ အညီ ဆေးကုဘုို့ စီစဉ်ရပါတော့တယ်။ မိသားစု ဆရာဝန်နဲ့ အထူးကု တုို့ နေ့စဉ် လာကြည့်ပေးပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက နာသလား လုို့ မေးတဲ့အခါ “အနာတော့ ရှိတာပေါ. နာတာ ဘာဖြစ်သလဲ” “အနိစ္စ… အနိစ္စ”လုို့ ဗမာလုို ရေရွတ်ပါတယ်။ နာတာကုို အရေးကြီးတယ်လုို့ သဘောမထားတာပါ။
တစ်မနက်.. အထူးကု ရောက်လာတဲ့အခါ.. ဝေဒနာကြောင့် ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်မှာကုို ဆရာဝန်က အတော် စုိုးရိမ်ပုံပေါ်တယ်။ ညက ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ရဲ့လား လုို့ မေးတဲ့အခါ အမေက “ဟင့်အင်း လုံးဝ မအိပ်ဘုး” လုို့ ပြန်ဖြေတယ်။ ဒါနဲ့ ဆရာဝန်က အိပ်ဆေးသောက်ဘုို့ ပေးထားခဲ့တယ်။ အမေကလဲ သောက်ပါတယ်။ နောက်တနေ့ ဆရာဝန် ရောက်လာပြီး မေးတဲ့အခါ အမေကအိပ်မပျော်ဘူးလုို့ပဲ ဖြေတယ်။ လူနာက နာတယ်လုို့ မပြောပေမဲ့ ဆရာဝန်ကတော့ အလွန်အမင်း နာကျင်နေလုို့သာ မအိပ်တာလုို့ တွက်ပါတယ်။ ဆေးဝါးရှားပါးတဲ့အတွက် ဘယ်ဆေး ဝယ်လုို့ ရမယ်ဆုိုတာ မသိတော့ အိပ်ဆေးပြင်းပြင်း ၃မျိူးကုို ရေးပေးပါတယ်။ ရရာ ဝယ်ဆုိုတဲ့ သဘောမျိူး။
ဖြစ်ချင်တော့ ၃မျိူး စလုံး ဝယ်လုို့ ရသွားပြီး ၃မျိူးစလုံး သောက်မိရက်သား ဖြစ်သွား တယ်။ နောက်နေ့ မနက်မှာ ထုံးစံအတုိုင်း ပြောတာက မျက်ခွံတွေသာ လေးနေတာ. တညလုံး အိပ်မပျော်ဘူး ဆုိုတာပဲ။ ဒီနေရာမှာ…ဆရာဝန်က သဘောမပေါက်တာမျိူး ကျွန်တော်လည်း ကြုံဘူးတယ်။ တရားထုိုင်တဲ့ လူတယောက်အတွက် အိပ်တဲ့ ကိစ္စဟာ အရေး မကြီးပါဘူး..အထူးသဖြင့် သေခါနီးဆဲဆဲ အချိန်တွေမှာပေါ့။
အိပ်ပျော်အောင် အိပ်ဆေးတွေ ဘယ်လုိုပင် ပေးသော်လည်း အမေ့ရဲ့ မြဲမြံတဲ့ သန္နိဋ္ဌာန်ကြောင့် နုိုးနေတာပါ။ အမေဟာ မရပ်မနား တရားမှတ်နေခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ အိပ်ဆေးတွေက အလုပ်မဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ဆရာဝန်ကုို ပြောပြရတာပေါ့။ ဆရာဝန်က နားမလည်နုိုင်ဘူး။ ဒီလောက်ပြင်းတဲ့ အိပ်ဆေးတွေ ပေးတာတောင် မအိပ်နုိုင်ဘူးဆုိုတော့ အတော် နာနေလုို့ ဖြစ်မယ်လုို့ ဆရာဝန်က ပြောတယ်။ နာလုို့ မအိပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဝိပဿနာတရားမှတ်နေတဲ့အတွက် တစ်ကုိုယ်လုံးက ခံစားချက်ကုို မှတ်နေတာ ဖြစ်လုို့ မအိပ်တာပါ လုို့ ဆရာဝန်ကုို ပြောရတယ်။
အမေ့အခန်းထဲကက ထွက်လာတော့ ဆရာဝန်က ဘာပြောလဲဆုိုရင် ဒီနားက သူ့အရွယ် အမျိူးသမီးတယောက်လည်း အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်နေတာပဲ။ နာလွန်းလုို့ အော်ဟစ်ငုိုယုိုနေရတယ် လုို့ ဆုိုတယ်။ ကြားရတာ အတော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့အတွက်တော့ ကုိုယ်တွေလဲ ဘာမှ မတတ်နုိုင်ပါဘူး။ ဒီမှာတော့ ကျွန်တော်တုို့ အမေက ပြုံးလုို့ပေါ့။
အမေကွယ်လွန်မဲ့ ညမှာ မိသားစုလုံး အမေနဲ့ အတူ တရားထုိုင်ကြပါတယ်။ ည ၁၁နာရိ ထုိုးတဲ့အခါ အမေက.. သိပ်မုိုးချုပ်နေပြီ. သွားအိပ်ကြပါတော့ လုို့ ပြောတယ်။ သန်းခေါင်ယံရောက်တော့.. ညတာဝန်ကျ..သူနာပြုဆရာမလေးက အအမေ့လက်မှာ သွေးမလျှောက်တော့တာကုို သတိပြုမိတယ်။ သေဖို့အချိန် နီးကပ်လာပြီဆုိုပြီး သားသမီးတွေကုို နုိုးလုိုက်ရမလား လုို့ မေးတော့ အမေက “အချိန်မကျသေးပါဘူး။ အချိန်ကျရင် ပြောမယ်” လုို့ ဖြေပါတယ်။
မနက် ၃နာရီထုိုးတဲ့အချိန်မှာတော့ အချိန်ရောက်ပြီ။ တအိမ်လုံးကုို နှိုးပါ။ ငါ သွားရတော့မယ်လုို့ ဆုိုပါသတဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ တအိမ်လုံး နုိုးလာပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ သိရတာက သူ့တကုိုယ်လုံး နေရာတော်တော်များများမှာ သွေးလုံးဝ မလျှောက်တော့တာပါပဲ၊ ဒါနဲ့..ဆရာကြီးဦးဘခင်နဲ့ မိသားစုဆရာဝန်ကုို ဖုန်းဆက်လုိုက်တော့ ၂ယောက်စလုံး အမြန်ရောက်ချလာပါတယ်။ ဆရာဝန်က “အချိန် သိတ်မကြာတော့ဘူး။ မိနစ်အနည်းငယ်ပဲ နေရတော့မယ်” လုို့ ပြောပါတယ်။ ဆရာကြီး ရောက်တဲ့အချိန်မှာ အမေက ပက်လက်လဲလျောင်းနေပါတယ်။ လက်တွေမှာ လုံးဝ သွေးမလျှောက်တော့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဆရာကြီးကုို မြင်တာနဲ့ တပြိုင်တည်း လက်တွေကုို မြှောက်ပြီး လက်အုပ်ချီ အရုိုအသေပြုပါတယ်။
မကွယ်လွန်မီ ၅မိနစ်ခန့်အလုို အမေက ကျွန်တော့်ကုို စုိုက်ကြည့်ပြီး “ထုိုင်ချင်တယ်” လုို့ ပြောပါတယ်။ ဆရာဝန်ကုို အကြံတောင်းတဲ့အနေနဲ့ လှမ်းကြည့်တော့ ဆရာဝန်က “မိနစ်ပုိုင်းအတွင်းမှာ သူသွားရတော့မယ်။ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အသက်ထွက်ပါစေ။ သွားရွှေ့လုိုက်ရင် နာကြင်ပြီး အသက်ထွက်ရမယ်။ အခုတောင် တော်တော်ဝေဒနာခံစားနေရတာ. ဒီအတုိုင်းပဲ ထားလုိုက်ပါ ” လုို့ ပြောပါတယ်။ ဆရာဝန်ပြောတာကုို အမေကြားပါတယ်။ “ဟင့်အင်း၊ ငါ ထုိုင်ပါရစေ” လုို့ အမေက ထပ်ပြောတဲ့ အခါမှာတော့ “ဒါ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒပဲလေ. ဆရာဝန် ပြောတဲ့ နာကျင်တာတွေလဲ သူ ဂရုမစုိုက်တော့ပါဘူး။ ထုိုင်နုိုင်အောင် ကူညီမှပဲ” စဉ်းစားမိပါတယ်။
ဒါနဲ့ နောက်ဖက်မှာ ခေါင်းအုံးတွေ ခုပေုးပြီး မှီထုိုင်ခုိုင်းပါတယ်။ တရားထုိုင်သလုို တင်ပလင်ခွေထုိုင်ပြီး ကျွန်တော်တုို့ အားလုံးကုို တည့်တည့် ကြည့်ပါတယ်။ “ကုိုယ်ခန္ဒာက ခံစားချက်တွေကုို ရသလား။ မမြဲတဲ့ အနိစ္စကုို ခံစားရသလား” လုို့ မေးတဲ့အခါ အမေက လက်ကုို မြှောက် ခေါင်းကုို ထိပြီး “အနိစ္စ အနိစ္စ” လုို့ ပြောပါတယ်။ အမေ က ပြုံးနေပါတယ်။ မိနစ်ဝက်ခန့် အကြာ မှာ အမေ အသက်ထွက်သွားပါတယ်။ အသက်ရှင်စဉ် ကာလမှာ အမေ့မျက်နှာဟာ ဝင်းပနေတယ်။ ကွယ်လွန်ပြီးနောက်မှာလည်း အမေ့မျက်နှာက ဝင်းပလုို့ နေပါတယ်။
မိခင် သေဆုံးပြီးနောက် ဦးဂုိုအင်ကာ သည် ဗုဒ္ဓဖွားမြင်ရာ အိန္ဒိယသုို့ တဖန်ပြန်၍ ဗုဒ္ဓ၏ လမ်းညွှန်ချက်များကုို သင်ကြားရန် မြန်မာပြည်ကုို စွန့်ခွာသွားခဲ့ေ​လသည်​
“သဆေုံးခြိနျမှာ ခန်ဒာကိုယျပျေါက ခံစားခကျြမှနျသမြှကို သိနိုငျသလား?” (unicode)
၁၉၈၅မှာ ဦးဂိုအငျကာရဲ့ တပညျ့တယောကျက ခုလို မေးတယျ။
“သဆေုံးခြိနျမှာ ခန်ဓာကိုယျပျေါက ခံစားခကျြမှနျသမြှကို သိနိုငျသလား?”
ဦးဂိုအငျကာ က ၎င်းငျး၏ မိခငျ သဆေုံးသှားပုံကို ဥပမာပေးပွီး အောကျပါအတိုငျး ပွနျဖွပေါတယျ။
(ဒီအကွောငျးကို ၁၉၉၂ ခုနှဈ ဧပွီလထုတျ ဝိပသနာ သတငျးစဉျမှာ ထညျ့သှငျး ဖျေါပွခဲ့တယျ)
“ကြှနျတျောဟာ မိသားစုထဲမှာ သား၆ယောကျ ရှိတဲ့အနကျက သားတဦးဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ ဦးလေးနဲ့ အဒျေါတို့မှာ သမီးခညျြးပဲ ၆ယောကျထှနျးကားပွီး သားမထှနျးကားတဲ့အတှကျ ကြှနျတျော ခပျငယျငယျမှာ အပွီးအပိုငျ ချေါယူ မှေးစားခဲ့တယျ။ ကြှနျတေျာ့မှေးစားမိခငျ ဟာ ဆရာကွီး ဦးဘခငျရဲ့ တပညျ့ရငျး ဖွဈပွီး ဆရာကွီးရဲ့ လမျးညှနျမှုနဲ့ တရားထိုငျခဲ့တာ အတျော ပေါကျမွောကျခဲ့ပါတယျ။ ဆရာကွီးရဲ့ အထူး အလေးထားခဈြခငျမှုကို ခံရပွီး မှတျမိသလောကျဆိုရငျ ဆရာကွီးရဲ့ ရှမှေ့ောကျမှာ ကှယျလှနျအနိစ်စရောကျတဲ့ တဦးတညျးသော တပညျ့လညျး ဖွဈပါတယျ။
၁၉၆၇ခုနှဈ အမေ့ အသကျ ၇၀ အရှယျခနျ့မှာ အသညျးကငျဆာဖွဈနတောကို သိရပါတယျ။ ရောဂါက အတျော ကွှမျးတဲ့ အဆငျ့ ရောကျနပေါပွီ။ အမေ ဘယျအခြိနျကတညျးက ခုလို ဝဒေနာခံစားနရေတယျဆိုတာကို တဈမိသားစုလုံး..မသိကွပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ တခါမှ ထုတျပွီး မငွီးညူဘူးလို့ပါ။ မကှယျလှနျမီ တပါတျလောကျ အလိုကတြော့မှ အသဲရှိတဲ့ နရောကို ထောကျပွီး နာတယျလို့ ခပျတိုတိုပဲ ပွောပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ မိနျးမ က.. ဘယျလို နာပုံမြိူးလဲလို့.. မေးတဲ့အခါ ကလေးမှေးခါနီး နာသလိုပဲ။ ဒါပမေဲ့ အခုနာတာက မရပျမနား အမွဲနာနတောပါ လို့ ဆိုတယျ။
အသညျးကငျဆာ ဖွဈလာတော့ အမရေဲ့ တရားထိုငျသကျတမျးက ၇နှဈလောကျ ဖွဈနပေါပွီ။ အမဟော ရိပျသာ တဈခါသှားရငျ ၁ဝရကျ၊ တလ၊ သို့မဟုတျ အခြိနျအတိုငျးအတာ တခုအထိ ကွာပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ခရီးဆောငျအိတျဟာ အမွဲလို အဆငျသငျ့ ထုတျပိုးပွီးသား ဖွဈနပေါတယျ။ ရိပျသာ မသှားဖွဈလို့ အိမျမှာဆိုလညျး သူ့ဘာသာ သူ တရားထိုငျပါတယျ။ အမဟော ဘာသာရေး အလှနျကိုငျးရှိုငျးတဲ့ ဟိန်ဒူ အသိုငျးအဝိုငျးက လာပမေဲ့ ဟိန်ဒူဘာသာရေးအရ ရှတျဖတျသရဇ်ဇယျြတာ၊ ဘုရားရှိချိုးတာမြိူးတှေ လုံးဝ မလုပျတော့ဘဲ အားလုံးကို အတိတျမှာ ခနျြထားခဲ့ပါတယျ။
ကငျဆာ ဖွဈတယျလို့ သိတဲ့နကေ့ စပွီး ၇ ရကျအကွာ ကှယျလှနျခြိနျ အထိ မညျသူ့ကိုမြှ သူ့ရောဂါအကွောငျး ပွောခှငျ့ မပွုတော့ပါဘူး။ ဝိပသနာတရားထိုငျမဲ့သူတှကေိုသာ သူ့အခနျးထဲကို ဝငျခှငျ့ပွုပွီး တိတျဆိတျစှာ ပွနျလညျ ထှကျခှါစတေယျ။ ဟိန်ဒူထုံးတမျးစဉျလာမှာ ကှယျလှနျခါနီး လူကို လာရောကျ အရိုအသပေေးကွရပါတယျ။ အမဟော အလှနျ လူသိမြား ထငျရှားသူလညျး ဖွဈလို့ အခုလို ဖွဈလာတဲ့အခြိနျမှာ မွငျခငျြတှခေ့ငျြသူတှေ မြားလှပါတယျ။
နောကျဆုံအခွအေနကေို ရောကျနတေဲ့အခြိနျမှာ အမကေ လူတှကေို အိမျလာလညျဖို့ ခှငျ့ပွုပမေဲ့ တရားထိုငျမဲ့သူ မဟုတျရငျတော့ သူ့အခနျးထဲကို ပေးမဝငျဘို့ တငျးကွပျစှာ တားမွဈထားတယျ။ အခနျးပေါကျဝမှာ တိတျဆိတျစှာ ထိုငျရပါတယျ။ အမကေ ဆေးကုဖို့ လုံးဝ စိတျမဝငျစားပမေဲ့ ကြှနျတျောကတော့ သားတယောကျရဲ့ ဝတ်တရားနဲ့ အညီ ဆေးကုဘို့ စီစဉျရပါတော့တယျ။ မိသားစု ဆရာဝနျနဲ့ အထူးကု တို့ နစေ့ဉျ လာကွညျ့ပေးပါတယျ။ ဆရာဝနျတှကေ နာသလား လို့ မေးတဲ့အခါ “အနာတော့ ရှိတာပေါ. နာတာ ဘာဖွဈသလဲ” “အနိစ်စ… အနိစ်စ”လို့ ဗမာလို ရရှေတျပါတယျ။ နာတာကို အရေးကွီးတယျလို့ သဘောမထားတာပါ။
တဈမနကျ.. အထူးကု ရောကျလာတဲ့အခါ.. ဝဒေနာကွောငျ့ ကောငျးကောငျး အိပျမပြျောမှာကို ဆရာဝနျက အတျော စိုးရိမျပုံပျေါတယျ။ ညက ကောငျးကောငျးအိပျပြျောရဲ့လား လို့ မေးတဲ့အခါ အမကေ “ဟငျ့အငျး လုံးဝ မအိပျဘူး” လို့ ပွနျဖွတေယျ။ ဒါနဲ့ ဆရာဝနျက အိပျဆေးသောကျဘို့ ပေးထားခဲ့တယျ။ အမကေလဲ သောကျပါတယျ။ နောကျတနေ့ ဆရာဝနျ ရောကျလာပွီး မေးတဲ့အခါ အမကေအိပျမပြျောဘူးလို့ပဲ ဖွတေယျ။ လူနာက နာတယျလို့ မပွောပမေဲ့ ဆရာဝနျကတော့ အလှနျအမငျး နာကငျြနလေို့သာ မအိပျတာလို့ တှကျပါတယျ။ ဆေးဝါးရှားပါးတဲ့အတှကျ ဘယျဆေး ဝယျလို့ ရမယျဆိုတာ မသိတော့ အိပျဆေးပွငျးပွငျး ၃မြိူးကို ရေးပေးပါတယျ။ ရရာ ဝယျဆိုတဲ့ သဘောမြိူး။
ဖွဈခငျြတော့ ၃မြိူး စလုံး ဝယျလို့ ရသှားပွီး ၃မြိူးစလုံး သောကျမိရကျသား ဖွဈသှား တယျ။ နောကျနေ့ မနကျမှာ ထုံးစံအတိုငျး ပွောတာက မကျြခှံတှသော လေးနတော. တညလုံး အိပျမပြျောဘူး ဆိုတာပဲ။ ဒီနရောမှာ…ဆရာဝနျက သဘောမပေါကျတာမြိူး ကြှနျတျောလညျး ကွုံဘူးတယျ။ တရားထိုငျတဲ့ လူတယောကျအတှကျ အိပျတဲ့ ကိစ်စဟာ အရေး မကွီးပါဘူး..အထူးသဖွငျ့ သခေါနီးဆဲဆဲ အခြိနျတှမှောပေါ့။
အိပျပြျောအောငျ အိပျဆေးတှေ ဘယျလိုပငျ ပေးသျောလညျး အမရေဲ့ မွဲမွံတဲ့ သန်နိဋ်ဌာနျကွောငျ့ နိုးနတောပါ။ အမဟော မရပျမနား တရားမှတျနခေဲ့တယျ။ ဒါနဲ့ အိပျဆေးတှကေ အလုပျမဖွဈတဲ့ အကွောငျး ဆရာဝနျကို ပွောပွရတာပေါ့။ ဆရာဝနျက နားမလညျနိုငျဘူး။ ဒီလောကျပွငျးတဲ့ အိပျဆေးတှေ ပေးတာတောငျ မအိပျနိုငျဘူးဆိုတော့ အတျော နာနလေို့ ဖွဈမယျလို့ ဆရာဝနျက ပွောတယျ။ နာလို့ မအိပျတာ မဟုတျပါဘူး။ ဝိပဿနာတရားမှတျနတေဲ့အတှကျ တဈကိုယျလုံးက ခံစားခကျြကို မှတျနတော ဖွဈလို့ မအိပျတာပါ လို့ ဆရာဝနျကို ပွောရတယျ။
အမအေ့ခနျးထဲကက ထှကျလာတော့ ဆရာဝနျက ဘာပွောလဲဆိုရငျ ဒီနားက သူ့အရှယျ အမြိူးသမီးတယောကျလညျး အသညျးကငျဆာ ဖွဈနတောပဲ။ နာလှနျးလို့ အျောဟဈငိုယိုနရေတယျ လို့ ဆိုတယျ။ ကွားရတာ အတျော စိတျမကောငျး ဖွဈမိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ့အတှကျတော့ ကိုယျတှလေဲ ဘာမှ မတတျနိုငျပါဘူး။ ဒီမှာတော့ ကြှနျတျောတို့ အမကေ ပွုံးလို့ပေါ့။
အမကှေယျလှနျမဲ့ ညမှာ မိသားစုလုံး အမနေဲ့ အတူ တရားထိုငျကွပါတယျ။ ည ၁၁နာရိ ထိုးတဲ့အခါ အမကေ.. သိပျမိုးခြုပျနပွေီ. သှားအိပျကွပါတော့ လို့ ပွောတယျ။ သနျးခေါငျယံရောကျတော့.. ညတာဝနျကြ..သူနာပွုဆရာမလေးက အအမလေ့ကျမှာ သှေးမလြှောကျတော့တာကို သတိပွုမိတယျ။ သဖေို့ အခြိနျ နီးကပျလာပွီဆိုပွီး သားသမီးတှကေို နိုးလိုကျရမလား လို့ မေးတော့ အမကေ “အခြိနျမကသြေးပါဘူး။ အခြိနျကရြငျ ပွောမယျ” လို့ ဖွပေါတယျ။
မနကျ ၃နာရီထိုးတဲ့အခြိနျမှာတော့ အခြိနျရောကျပွီ။ တအိမျလုံးကို နှိုးပါ။ ငါ သှားရတော့မယျလို့ ဆိုပါသတဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ တအိမျလုံး နိုးလာပါတယျ။ အဲဒီတော့မှ သိရတာက သူ့တကိုယျလုံး နရောတျောတျောမြားမြားမှာ သှေးလုံးဝ မလြှောကျတော့တာပါပဲ၊ ဒါနဲ့..ဆရာကွီးဦးဘခငျနဲ့ မိသားစုဆရာဝနျကို ဖုနျးဆကျလိုကျတော့ ၂ယောကျစလုံး အမွနျရောကျခလြာပါတယျ။ ဆရာဝနျက “အခြိနျ သိတျမကွာတော့ဘူး။ မိနဈအနညျးငယျပဲ နရေတော့မယျ” လို့ ပွောပါတယျ။ ဆရာကွီး ရောကျတဲ့အခြိနျမှာ အမကေ ပကျလကျလဲလြောငျးနပေါတယျ။ လကျတှမှော လုံးဝ သှေးမလြှောကျတော့ပါ။ ဒါပမေဲ့ ဆရာကွီးကို မွငျတာနဲ့ တပွိုငျတညျး လကျတှကေို မွှောကျပွီး လကျအုပျခြီ အရိုအသပွေုပါတယျ။
မကှယျလှနျမီ ၅မိနဈခနျ့အလို အမကေ ကြှနျတေျာ့ကို စိုကျကွညျ့ပွီး “ထိုငျခငျြတယျ” လို့ ပွောပါတယျ။ ဆရာဝနျကို အကွံတောငျးတဲ့အနနေဲ့ လှမျးကွညျ့တော့ ဆရာဝနျက “မိနဈပိုငျးအတှငျးမှာ သူသှားရတော့မယျ။ ငွိမျးငွိမျးခမျြးခမျြး အသကျထှကျပါစေ။ သှားရှလေို့ကျရငျ နာကွငျပွီး အသကျထှကျရမယျ။ အခုတောငျ တျောတျောဝဒေနာခံစားနရေတာ. ဒီအတိုငျးပဲ ထားလိုကျပါ ” လို့ ပွောပါတယျ။ ဆရာဝနျပွောတာကို အမကွေားပါတယျ။ “ဟငျ့အငျး၊ ငါ ထိုငျပါရစေ” လို့ အမကေ ထပျပွောတဲ့ အခါမှာတော့ “ဒါ သူ့ရဲ့ နောကျဆုံးဆန်ဒပဲလေ. ဆရာဝနျ ပွောတဲ့ နာကငျြတာတှလေဲ သူ ဂရုမစိုကျတော့ပါဘူး။ ထိုငျနိုငျအောငျ ကူညီမှပဲ” စဉျးစားမိပါတယျ။
ဒါနဲ့ နောကျဖကျမှာ ခေါငျးအုံးတှေ ခုပေုးပွီး မှီထိုငျခိုငျးပါတယျ။ တရားထိုငျသလို တငျပလငျခှထေိုငျပွီး ကြှနျတျောတို့ အားလုံးကို တညျ့တညျ့ ကွညျ့ပါတယျ။ “ကိုယျခန်ဒာက ခံစားခကျြတှကေို ရသလား။ မမွဲတဲ့ အနိစ်စကို ခံစားရသလား” လို့ မေးတဲ့အခါ အမကေ လကျကို မွှောကျ ခေါငျးကို ထိပွီး “အနိစ်စ အနိစ်စ” လို့ ပွောပါတယျ။ အမေ က ပွုံးနပေါတယျ။ မိနဈဝကျခနျ့ အကွာ မှာ အမေ အသကျထှကျသှားပါတယျ။ အသကျရှငျစဉျ ကာလမှာ အမမေ့ကျြနှာဟာ ဝငျးပနတေယျ။ ကှယျလှနျပွီးနောကျမှာလညျး အမမေ့ကျြနှာက ဝငျးပလို့ နပေါတယျ။
မိခငျ သဆေုံးပွီးနောကျ ဦးဂိုအငျကာ သညျ ဗုဒ်ဓဖှားမွငျရာ အိန်ဒိယသို့ တဖနျပွနျ၍ ဗုဒ်ဓ၏ လမျးညှနျခကျြမြားကို သငျကွားရနျ မွနျမာပွညျကို စှနျ့ခှာသှားခဲ့ေ​လသညျ​
Previous post လူသိနည်းတဲ့ ရှာရှာဖွေဖွေ ဗဟုသုတလေးများ
Next post ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပင်လယ်ကူး ဇိမ်ခံသင်္ဘောကြီးအကြောင်း